Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Psoriasis Genital: Vokatry ny Fianarana Vaovao
Ny fandinihana dia naneho fa ny Otezla 30 mg oral indroa isan'andro dia nahatratra fanatsarana manan-danja ara-pahasalamana sy ara-statistika, raha ampitahaina amin'ny plasebo, amin'ny teboka voalohany amin'ny valin'ny fanombanana ara-pananahana ara-pananahana ara-pananahana (sPGA-G) ho an'ny mpitsabo static (voafaritra ho isa sPGA-G). mazava (0) na saika mazava (1) miaraka amin'ny fampihenana 2 isa farafahakeliny avy amin'ny fototra) amin'ny herinandro 16.
Ankoatr'izay, ny teboka faharoa rehetra dia nihaona tamin'ny fanatsarana manan-danja sy manan-danja amin'ny valin'ny GPI-NRS (famaritana ho fampihenana farafahakeliny 4 avy amin'ny baseline amin'ny isa GPI-NRS ao amin'ny Genital Psoriasis Symptoms). ho an'ny taranja manana isa fototra ≥ 4); fiovan'ny faritry ny vatana (BSA) voakasika avy amin'ny baseline; Dermatology Life Quality Index (DLQI) fiovana avy amin'ny fototra; ary ny valin'ny fanombanana maneran-tany ho an'ny mpitsabo (sPGA) (nofaritana ho isa sPGA mazava (0) na saika mazava (1) miaraka amin'ny fihenan'ny isa 2 farafahakeliny avy amin'ny baseline) amin'ny herinandro 16 miaraka amin'ny Otezla versus plasebo.
Ny karazana sy ny tahan'ny trangan-javatra ratsy hita tamin'ity fitsapana ity dia nifanaraka tamin'ny mombamomba ny fiarovana an'i Otezla. Ny trangan-javatra ratsy indrindra voalaza fa nitranga tamin'ny 5% farafahakeliny amin'ny marary amin'ny vondrona fitsaboana dia aretim-pivalanana, aretin'andoha, maloiloy ary nasopharyngitis.
Ireo marary mamita ny dingana roa jamba amin'ny fitsarana dia nanohy na nifindra tany Otezla nandritra ny dingana fanitarana ny fianarana ary hotsaboina hatramin'ny herinandro 32. Mitohy ny fianarana ary kasaina ho vita amin'ny tapany voalohany amin'ny 2022.
Ny valiny amin'ny antsipiriany avy amin'ny dingana roa-jambany 16 herinandro amin'ny fianarana dia hatolotra amin'ny fihaonambe ara-pitsaboana ho avy.
Any Etazonia, ny Otezla dia ankatoavina amin'ny fitsaboana ireo mararin'ny olon-dehibe manana psoriasis plaque antonony ka hatramin'ny henjana izay kandidà ho an'ny phototherapy na fitsaboana rafitra, marary olon-dehibe miaraka amin'ny arthritis psoriatika mavitrika ary ho an'ny marary olon-dehibe manana fery am-bava mifandray amin'ny aretin'i Behçet. Hatramin'ny nankatoavany voalohany ny FDA tamin'ny taona 2014, Otezla dia voatendry ho an'ny marary maherin'ny 650,000 maneran-tany miaraka amin'ny psoriasis plaque antonony ka hatramin'ny henjana, arthritis psoriatika mavitrika na aretin'i Behçet.